Yiyiphi ikhefu leManzi ekumele ndiyithenge?
Sciences soLuntu Ukuphila Okumnyama
by UFrederic Beaudry
Ukuthelekisa iintlobo zeebhotile ezivuselelekayo
Iplastiki (# 1, i-PET)
Abantu abaninzi bazalisa iibhotile zeplastiki ezingasetyenziswanga njengendlela ephantsi yokuphatha amanzi. Le bhotile yathengwa ngamanzi kuyo kwindawo yokuqala - yintoni engafanelekanga? Nangona ukugqitywa kwelinye kwibhodlela elitsha ngokukhenkcekileyo kungeke kubangele nayiphi na ingxaki, kunokubakho imiba xa iyenziwa ngokuphindaphindiweyo. Okokuqala, ezi bhotile zinzima ukuhlamba kwaye ngokunjalo zikwazi ukuthwala ibhaktheriya eziye zaqala ukuluqhawula ngomzuzu owokuqala ukuwuvala.
Ukongezelela, iiplastiki ezisetyenziselwa ukuveliswa kwezi bhotile azenziwanga ukusetyenziswa kwexesha elide. Ukwenza iplastiki iguquke, i-phthalates ingasetyenziselwa ekwenzeni ibhotile. Ama-epthalates abaphazamisayo be-endocrine, ukuxhalabisa okusingqongileyo , kwaye ngubani ongayilingisa ama-hormone emzimbeni wethu. Ezi ziikhemikhali zizinzile kwiqondo lokushisa (kunye nebhotile yeplastiki ifriji), kodwa iyakhululwa kwibhotile xa iplastiki ishushu. I-Federal Drug Administration (FDA) ithi yonke ikhemikhali ekhutshwe kwibhotile iye yalinganiswa kwinkxalabo engezansi nayiphina indawo engozini yokubeka ingozi. Kuze sisazi ngakumbi, mhlawumbi kulunge ukunciphisa ukusetyenziswa kwethu kweebhotile zeplastiki ezingasetyenziswanga, kunye nokuphepha ukuzisebenzisa emva kokuba zincinciwe okanye zihlanjwe kumaqondo aphezulu.
Iplastiki (# 7, i-polycarbonate)
Iibhotile ze-plastiki eziqinileyo, ezinokubuyiselwa eziqhelekileyo zibonwa zihlulwe kwi-backpack zibhalwe njengeplastiki # 7, edla ngokubhekisela ukuba kukho i-polycarbonate.
Nangona kunjalo, ezinye iiplastiki ziyakwazi ukufumana loo nombolo ebizwa ngokutsha. Iipolcarbonate zihloliswe kungekudala nje ngenxa yobukho be-bisphenol-A (BPA) engangena kwi-bhotile yomxholo. Izifundo ezininzi zidibene ne-BPA kunye neengxaki zempilo yokuzala kwizilwanyana zokuvavanya, nakubantu.
I-FDA ithi ngoku bafumanise ukuba amanqanaba eBPA asuka kwiibhotile ze-polycarbonate ukuba aphantsi kakhulu ukuba abe nexhala, kodwa bacebisa ukunciphisa ukuvezwa kwabantwana kwi-BPA ngokungashushu iibhotile ze-polycarbonate, okanye ngokukhetha ezinye iindlela zebhotile. Iiplastiki eziqulethe i-BPA zisasetyenziselwa eUnited States ukwenzela ukuvelisa iikomityi zeengxaki zezingane, iibhotile zentsana kunye nokufakelwa kwefomula yomntwana.
Iibhotile ze-polycarbonate ezingenazo i-BPA zapapashwa ukuba zithuthukise ukwesaba koluntu lwe-BPA kwaye zizalise i-market difference. Ukutshintshwa okuqhelekileyo, i-bisphenol-S (i-BPS), kucatshangelwa ukuba akunakwenzeka kakhulu ukuphuma kwiiplastiki, kodwa ingafumaneka kumchamo wabantu abaninzi baseMelika abavavanyelwe yona. Kwaye kwimeko ephantsi kakhulu ifunyenwe ukuphazamisa i-hormone, i-neurological, kunye nenhliziyo yentsebenzo kwizilwanyana zokuvavanya. I-BPA-free does not mean the safety.
Ukutya kwibakala engenasinxiba yinto ekhuselekileyo yokunxibelelana namanzi okusela. Iibhotile zensimbi nazo zineenzuzo zokuxhatshazwa, ukuhlala ixesha elide, kunye nokunyamezela kwamaqondo aphezulu. Xa ukhetha ibhotile yamanzi yensimbi, qiniseka ukuba insimbi ayitholakali kuphela ngaphandle kwebhotile, kunye ne-plastic liner ngaphakathi.
Ezi bhotile ezincinci zikhoyo zikhona ezinokungaqiniseki kwempilo efana neebhotile ze-polycarbonate.
Iibhotile zamanzi ezi-aluminium azixhatshali, kwaye zilula ngaphezu kweebhotile zensimbi. Ngenxa yokuba i-aluminium inokungena kwi-liquids, i-liner kufuneka ifakwe ngaphakathi kwibhotile. Kwezinye iimeko ukuba i-liner ingaba yi-resin eboniswe iqulethe i-BPA. I-SIGG, umenzi weebhotile yamanzi e-aluminium ephezulu, usebenzisa i-BPA-free kunye ne-phthalate yamahhala e-bhatta, kodwa iyancipha ukubonakalisa ukubunjwa kwala ma-resin. Njengoko ngensimbi, i- aluminium inokuphinda iphinde ivuselelwe kodwa iyindleko enkulu ukuvelisa.
Iibhotile zeglasi zilula ukufumana ixabiso elincinci: i-juice egciniweyo yokuthengwa okanye itiye ihlamba iphinde iphindwe ngenxa yokusebenza kwamanzi. Izimbiza zokulondoloza zilula nje ukuzifumana. I-Glass igxininiswe kwiindawo ezininzi zokushisa, kwaye ayiyi kuvuza imichiza emanzini akho.
I-Glass iyaphinda ibuyeke kwakhona. Impendulo ephambili yeglasi, eqinisweni, ingadibanisa xa idibene. Ngenxa yoko iirazi ayivunyelwe kwiindawo ezininzi zamabhishi, amachibi aseburhulumenteni, amapaki, kunye neendawo zokuhlala. Nangona kunjalo, abanye abavelisi bakhiqiza iibhotile zeglasi zihlanganiswe ngeengubo ezingenakunqanda. Ukuba ingilazi yangaphakathi iphula, i-shards ihlala ngaphakathi kwengubo. Ukongezwa okongeziweyo kweglasi kuyisisindo salo-abaxhasi be-gram-conscious will prefer their options.
Kulo mzuzwana, i-bakala engenakucinci yensimbi kunye neebhotile zamanzi eziglasi zidibaniswa nokungaqiniseki okuncinci. Ngokomntu, ndifumanisa iindleko ezilula kunye nezantsi kwezoqoqosho nezindalo zeglasi. Uninzi lwexesha, nangona kunjalo, ndifumana amanzi okusela amanzi emgodini omdala wekheramic.
Cooper et al. 2011. Uvavanyo lweBisphenol Ekhutshwa kwiPlastiki eguqukayo, i-Aluminium kunye neBlue Wireless Wireless. I-Chemosphere, vol. 85.
IBhunga loKhuseleko loLuntu. Iiplastiki zamanzi ePlastiki.
Scientific American. I-BPA-Free Free Containers Inokuba Yingozi Nje.
Ukutya Ukutya Okukufutshane Kwendawo Kukunceda njani Ukusingqongileyo?
Indlela Yokugcina Ipholile Ngaphandle Komoya
Eco-Friendly Wood Wood Wax
Abantu abaPhezulu beXesha lama-20
Ngowe-1979 Ukuthungulwa kweMosque eMorca eMecca
Iingcebiso zokunyamezela iCeremony Ceremony